Xildhibaan Foosiye Yuusuf X. Aadan Oo Ka Hadashay Arrimaha Wada Hadalada Somaliland iyo Somali | Raadgoob
Xildhibaan Foosiye Yuusuf X. Aadan Oo Ka Hadashay Arrimaha Wada Hadalada Somaliland iyo Somali
hargaysa'(RAAD GOOB ):-Wasiirkii hore ee arimaha dibada soomaaliya Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan kana tirsan xildhibaanad golaha shacabka ayaa ka hadashay wada hadalada la qorshaynayo inay dhawaan u furmaan somaliland iyo soomaaliya.
Xildhibaan Foosiye ayaa ku talisay in odayaal dhaqameed loo saaro wada hadalka labada dhinac isla markaana siyaasiyiinta loo soo gudbiyo natiijada ay isla gaadheen madax dhaqameedku.
Xildhibaan Foosiye ayaa qoraal ay ku baahisay bogeeda Twitter-ka waxay ku tidhi “”Waxan la soconaa in mar kale la wado wada hadal Somalia iyo Somaliland lagu wada hadalsiinayo dal kale.
Waxaa ka habboon in Odayaal dhaqameed culus labada garab laga keeno oo gogol loo dhigo meel dalka ah oo nabad ah muddo dheer lasiiyo kaddib siyaasiyiinta loo gudbiyo go’aanka,” ayey tidhi xildhibaan Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan.
Tan iyo markii uu bilaabmay wada hadalka u dhaxeeya somaliland iyo soomaaliya, Turkiga ayaa la sheegay inuu mar isku dayey in lays horfadhiisiyo madax dhaqameed kala matala labada dhinac kuwaas oo go’aan isla gaadha balse qorshahaasi ayaan hirgelin.